Faly I Japana Fa Azon’I Arashiro Yukiya Ny Fanamiana Mena Tamin’ny Tour de France · Global Voices teny Malagasy
Faly I Japana Fa Azon'I Arashiro Yukiya Ny Fanamiana Mena Tamin'ny Tour de France
Voadika ny 09 Jolay 2016 5:20 GMT
Arashiro Yukiya. Pikantsary avy amin'ny fantsona ofisialy YouTube ny Tour de France Saitama Criterium .
Raha nahazo ny dingana fanombohana i Mark Cavendish tamin'ny Alakamisy 7 Jolay , ilay Japoney mpanao hazakazaka am-bisikileta Arashiro Yukiya kosa no nahazo ny “lokan'ny fikirizana” tamin'ny hazakazaka am-bisikileta tamin'ny dingana fahenina tamin'ny Tour de France .
Nahazo ny loka i Arashiro satria nitari-dalana tamin'ny elanelana lavitra mihoatra amin'ireo mpifaninana hafa tamin'ny halavirana 137 kilometatra amin'ny 190,5 kilaometatra izy, marindrano ny ankamaroan'ny dingana avy any Arpajon-sur-Cère mankany Montauban any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa. Nalaza tao amin'ny Twitter Japoney ny tenirohy #敢闘賞 (lokan'ny fikirizana) rehefa vita ny hazakazaka. Efa nahazo fanohanana betsaka i Arashiro avy amin'ireo mpankafy hazakazaka am-bisikileta rehefa miverina any Japana:
Feno hafaliana ny olon-drehetra rehefa nibata ny “amboaran'ny fikirizana” i Yukiya.
Nahazo ny “lokan'ny fikirizana” tamin'ny Tour de France ilay mpanao hazakazaka am-bisikileta Arashiro Yukiya! Nanome aingam-panahy antsika rehetra i!zy
Satria nahazo ny amboara i Arashiro noho izy niezaka indrindra tamin'ny hazakazaka am-bisikileta tamin'io andro io dia midika fa homem-boninahitra hitondra ny fanamiana mena manokana amin'ny dingana amin'ny zoma izy, izay hifarana eny amin'ny tendrombohitr'i Pyrénées.
Faha-enina amin'ny Tour de France ataon'i Arashiro izao. Tamin'ny 2009 izy no Japoney voalohany nahatafita hatramin'ny farany ny hazakazaka am-bisikileta rehefa nita ny tsipika fahatongavana teo amin'ny Champs-Elysées mialoha ilay namany japoney malaza indrindra Beppu Fumiyuki.
Tamin'ny 2012 i Arashiro no nahazo voalohany ny lokam-pifaninanana tamin'ny Tour de France dingana fahefatra.
Vaovao farany: nahazo ny fanamiana mena i Arashiro Yukiya tamin'ny dingana faha-enina amin'ny Tour de France. Faharoa tamin'ny loka azony tao anatin'ny efa-taona izany.
Ny fihazakazahana Lampre-Merida no vao nampisehoan'i Arashiro zava-bita tsara vao haingana tamin'ny Fitetezana an'i Japana tamin'ny Jona 2016.
Efa hatry ny ela i Arashiro no favori-n'ny mpijery maro, tsy noho ny toetrany tony sy ny fahafantarana fa mipetraka ao Frantsa izy ary miteny frantsay, fa noho ilay alikany miaraka aminy ao anatin'ny fanarahana ny Lampre-Merida ihany koa.
Nitondra ilay mpanao hazakazaka am-bisikileta Arashiro Yukiya ho any Angers, làlana adiny iray monja amin'ny fiaramiala amin'ny fonenany, ny dingana fahatelon'ny Tour de France. – Manampahefan'ny Fizahantany Frantsay (amin'ny teny Japoney)
Nisy ny fanantenana lehibe taorian'ny nisaloran'i Arashiro ny fanamina mena fa ho an'ny japoney ny fandresena amin'ny hazakazaka am-bisikileta amin'ny Tour de France amin'ity taona ity.
Nahazo ny fanamiana mena i Arashiro Yukiya androany. Mety handresy ve izy amin'ny dingana manaraka?